Mazuva ano zvigaro zvemagetsi zvakapetwa zvakagadzirirwa kupa nyaradzo uye rutsigiro kumushandisi. Izvo zvinovakwa zvichienderana nerudzi rwezvinhu izvo mushandisi anozoda pane zvavo zvavanoda. Kazhinji, iwe uchafanirwa kushandisa inodarika madhora zviuru gumi kubva muhomwe yako kutenga iyo wiricheya yemagetsi.
Chimwe chezvikonzero zvakajairika zvemunhu kushandisa an wiricheya yemagetsi ndipo pavanotadza kusimudzira chigaro vari vega vasina rumwe rubatsiro. Kubva panguva ino zvichienda kumberi, ivo vanozoda kana kutenga simba wiricheya kubatsira avo kufamba, kana kuwana chokufambisa wiricheya, izvo zvinoda rubatsiro rwemuchengeti.
Nepo mazhinji emagetsi wiricheya maficha kukwidziridzwa uye nyore kushandisa pane rimwe bhuku mavhiripu, kune zvimwe zvisina kunaka pairi futi. Kurema kwechigaro kunorema kupfuura chero chigaro chebhuku chawakamboshandisa.